Budapest မှာကြည့်ရအောင် ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ဘူဒါပက်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ဘူဒါပက် ၎င်းသည်ဥရောပ၌လူကြိုက်အများဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနှစ် ၄၀ ကျော်သောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်၊ မြို့သည်ဘာလင်တံတိုင်းပြိုလဲပြီးနောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောပုလဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ရှေးဟောင်းသမိုင်းကြောင်းကဒီမြို့ရဲ့ထောင့်တိုင်းမှာထင်ရှားနေတယ်။
ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုမြို့ကြီးများ? ဒါဟာဘူဒါပက်သည်မူလကမြို့ကြီး ၂ မြို့ဖြစ်သည့် Buda နှင့် Pest ဖြစ်သည်။ သုံးခုရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဘူဒါလည်းရှိနေလို့ပဲ။ ဒီမြို့မှာဒီအဖြစ်အပျက်ဟာဘာလဲ၊ ဘယ်အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကယနေ့ဥရောပမှာအလှဆုံးပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ ¿ဘူဒါပက်မှာငါတို့ဘာတွေမြင်နိုင်မလဲ အရာအားလုံးသင်ယူဖို့?
2 Budapest အတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ငါလက်ရှိမြို့အထက်တွင်ပြောသည်အဖြစ် သုံးရှေးဟောင်းမြို့ကြီးများ၏ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ်အလယ်ခေတ်တွင်မတူညီသောဇုန် ၃ ခုအဖြစ်တည်ရှိခဲ့သော ဗုဒ္ဓ ဒါဟာarchကရာဇ်အာဏာ၏ထိုင်ခုံဖြစ်ခဲ့သည် ကပ်ရောဂါ XNUMX ရာစုအတွက်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် Óbuda ဒါဟာအများဆုံးကျေးလက်ဒေသဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဒေသတွင်နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ အဲဒါပြောသင့်တယ် ရောမတွေကဒီနေရာကိုလှည့်ပတ်သွားကြတယ်၎င်းသည် ၁၈၇၃ တွင်သုံးမြို့ပေါင်းစည်းပြီးနောက် ပို၍ အလေးအနက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည် ပထမကမ္ဘာစစ်အထိမြို့သည်အပြောင်းအလဲများစွာကိုခံခဲ့ရသည်နေရာတိုင်းရှိတံတားများ၊ ပြတိုက်များ၊ ကဖေးများ၊ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ ဘူတာရုံများ။
ထို့နောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့် ၁၉၅၆ တော်လှန်ရေးတို့သည်လူ့ဆုံးရှုံးမှုများစွာနှင့်ဗိသုကာအမွေအနှစ်များအတွက်များစွာကုန်ကျခဲ့သည်။
မြို့တော် ဒူညုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကျိန်းဝပ်သည် ဒါကြောင့်တံတားတွေအမြဲတမ်းရှိခဲ့တယ် el တံတားဖြစ်ခဲ့သည် ချိန်းတံတား။ Count Szécheny၏အစပြုမှုနှင့်ဗြိတိသျှဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာနှစ် ဦး ၏တည်ဆောက်မှုအရတည်ဆောက်ထားခြင်းသည်၎င်းသည်ဘဏ္aာအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
အဆိုပါတံတားအကျင့်ကိုကျင့်အတွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် 1849တစ် ဦး ကြော့ ချည်နှောင်နှင့်အတူကျောက်တံတား အရာက၎င်း၏အချိန်တစ်ခုအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ဗုံးများသည်၎င်းကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ခေတ်မီခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လုံးဝ, တံတား၏ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပါ ညအချိန်တွင်ထ၎င်းသည်မြို့၏ဤအမှတ်အသား၏ကောင်းမွန်သောမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်သည်။
ဘူဒါပက်၏ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုမှာ စန်း Esteban ၏ Basilica ၏ရှုထောငျ့။ ၎င်းသည်မြို့၏ဤဒေသရှိအမြင့်ဆုံးရှုထောင့်ဖြစ်သောပိုးမွှားဟောင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည် 360 ရူပါရုံကိုဘယ်ဟာခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ ဘေစလီကာသည်ဘူဒါပတ်စဘုရားရှိခိုးကျောင်း မှလွဲ၍ မြို့တော်တွင်အမြင့်ဆုံးသောပါလီမန်အဆောက်အအုံနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းသောချာ့ချ်မဟုတ်ပါ။ ၁၈၅၁ မှစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀ ရာစုအစတွင်သာပြီးစီးခဲ့သည်။ မျက်နှာစာသည်မြစ်ကိုမျက်နှာမူ။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကဲ့သို့ကြီးမားသောအုတ်မြစ်များဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ် neoclassical စတိုင်၎င်းတွင်တာဝါတိုင်နှစ်ခုရှိပြီးတစ်ချိန်ကခေါင်းလောင်းနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုသည်စစ်အတွင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မိမိအ Chapel ၌တည်ရှိ၏ Santa Diestra ၏ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်သောဘုရင်စတီဖင် ၁ ၏လက်ရာမြောက်သောလက်ဖြစ်သည်, ပထမ ဦး ဆုံးဟန်ဂေရီဘုရင်နှင့်သူတော်စင်။
လှေကားထစ်တွေ၊ ဓာတ်လှေကားတွေနဲ့မြင်းစီးသူရဲခန်းမထဲ၊ အထပ်နှစ်ထပ်အကြား၊ နမူနာတွေနဲ့ပြပွဲတွေပါတဲ့အခန်းရှိတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်နံနက် ၁၀ နာရီတွင်ဖွင့်ပြီးညနေ ၆း၃၀ ခန့်တွင်ပိတ်သည်။ တံခါးပေါက်ပါ
သန့်ရှင်းသောအဆောက်အအုံများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်Buda Castle ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားကျောင်း။ ၎င်းသည်ထူးခြားဆန်းကြယ်သည့်အလွန်ကောင်းသောသမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်ပြီး gothic style နှင့်အလွန်လှပစွာအလှဆင်ထားသည်။ ဖြစ်သိတယ် coronation site ကို ရှငျဘုရငျတို့အဘို့နှင့်ယနေ့ကများသောအားဖြင့်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ပြပွဲကမ်းလှမ်း။ ၎င်းကိုနာမတော်ဖြင့်လည်းလူသိများသည် မiasိဘုရားကျောင်း ဒီအစဉ်အလာအရပထမဟန်ဂေရီဘုရင်စိန့်စတီဖင်ဟာ ၁၀၁၅ ခုနှစ်မှာဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။
အောက်ပါအချုပ်အခြာအာဏာများကသူတို့အားထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သော်လည်းဘုရင်မက်တီယပ်စ်ကသူ့ကိုသူ့အားပေးခဲ့သည် ခေတ်ဆန်းထိတွေ့မှု။ သူကသူပြောင်းလဲခဲ့သည့်အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ် အော်တိုမန်အင်ပါယာအောက်ရှိဗလီသို့မဟုတ်အလွန်တင့်တယ်သောအသံပညာဖြင့်လှပသောဘုရားကျောင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအရအကျော်ကြားဆုံး Sissi ၏ခင်ပွန်းFranciscoကရာဇ် Francisco José I သည်သရဖူဆောင်းခဲ့သည်။
El Buda ရဲတိုက် ဘူဒါပတ်စ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာမြင်ရမယ့်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ ဒီအမှတ်အထိ funicular အားဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, အများဆုံးအကြံပြုနှင့်ပါ။ အဆိုပါကားများဟောင်းဖြစ်ကြပြီးအမြင်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအာဒံကလာ့ခ်ရင်ပြင်နှင့်ရဲတိုက်နှင့်မည်သည့်အရာမှမဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ 1987 ကတည်းက ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်သည်နေ့တိုင်းနံနက် ၈ နာရီမှည ၈ နာရီအထိပြေးသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ငါးမိနစ်မှဆယ်မိနစ်တိုင်းလိုလိုနှင့်ပြုပြင်မှုပေါ် မူတည်၍ တနင်္လာနေ့တွင်ပြုလုပ်သည်။
Buda Castle သည်သမိုင်းဝင်အဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည် ရဲတိုက်နှင့်နန်းတော်ရှုပ်ထွေးသော ဟနျဂရေီရှငျဘုရငျ၏။ ရှေးအကျဆုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ၁၃ ရာစုမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသောကြီးမားသော Baroque နန်းတော်သည် ၁၈ ရာစုမှဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလယ်ခေတ်, Baroque နှင့် neoclassical ရောနှောနေသောပါVánnegyedသို့မဟုတ်ရဲတိုက်ရပ်ကွက်, အောက်မှာရှိသောတောင်ကုန်းပေါ်တွင်ရပ်တည်။ အမှန်တရားမှာဤမြို့၏ဤအပိုင်းသည်ထိပ်တိုက်တွေ့မှုအားလုံး၏မြင်ကွင်းဖြစ်သည် အကြိမ်အနည်းငယ်ဖျက်ဆီးခံရပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည် ကံကောင်းတာက, သမိုင်းနှင့်အနုပညာပြင်းထန်မှုတွေအများကြီးနှင့်အတူ။
ယနေ့သင်သည်အလယ်ခေတ်ကာလ၏ကျန်ရှိသောဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ Gothic ခန်းမ၊ တော် ၀ င်တိုက်ခန်းများ၊ အခမ်းအနားအခန်းများ၊ ရဲတိုက်၏တောင်ဘက်တောင်ပံ၌တည်၏ ဘူဒါပတ်စသမိုင်းပြတိုက်မြို့တော်ကိုစိတ်ဝင်စားစေမည့်အရာလေးခုပါရှိသည်။
El Mount Geller သည် ၂၃၅ မီတာသာမြင့်သည် သို့သော်ရာသီအရအရောင်ပြောင်းသောသစ်ပင်များ၏လှပမှုသည်။ ဒါဟာအစကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည် မြင်ကွင်းကျယ် ထိုမြို့၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ၁၀၄၆ တွင်အယူမှားများကလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံထားရသောခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးအားဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသည်။ ဒါကဒီမှာဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ Citadelကြီးမားသောစစ်ရေးရင်းမြစ်များဖြစ်သောချာ့ချ်၊ ကျော်ကြားသောGellèrt Spa နှင့်၎င်း၏ဟိုတယ်တို့ဖြစ်သည်။
ထိုအဆောက်အအုံသည်နယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန် (၁၉၄၈) ၏တော်လှန်ရေးဟုခေါ်ပြီးသည့်နောက် (၁၉) ရာစုတွင်နန်းတော်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုအမြောက်အမြားအတွက်အမြောက်များကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဆိုဗီယက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် လွတ်မြောက်ရေး၏ရုပ်ထုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအောင်ပွဲခံခြင်းသင်္ကေတ။
ငါတို့အရင်စကားပြောကြတယ် ပါလီမန်အဆောက်အ ဦးတစ်နာရီမခြားသောဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြင့်သင်လည်ပတ်နိုင်သောနေရာ။ သင်အမိုးခုံးသို့လည်ပတ်သည် ဟနျဂရေီတော်ဝင်သရဖူကိုစောင့်ဥပမာအားဖြင့် gala လှေကား၊ အထက်လွှတ်တော်သို့မဟုတ် hemicycle သို့။ ၎င်းသည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၏ထောင်စုနှစ်မြောက်နှစ်မြောက်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် အကျော်ကြားဆုံးအင်္ဂလိပ်ပါလီမန်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းဒါဟာ Renaissance နှင့် Baroque စတိုင်၌တည်ရှိ၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့အမည်ပေးခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Margarita ကျွန်း၂၈၀၀ မီတာရှိသောစိမ်းလန်းသောကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည် မြို့၏လူကြိုက်အများဆုံးအစိမ်းရောင်နှင့်အပန်းဖြေနေရာ။ ၎င်းသည်အမဲလိုက်ရန်နေရာဖြစ်သော်လည်းယနေ့ခေတ်တွင်အလယ်ခေတ်အပျက်အယွင်းများ၊ တင်းနစ်ကွင်းများ၊ ရုပ်ထုများနှင့်အဆုံးမဲ့လမ်းလျှောက်မှုများရှိသည်။ ကောင်းမွန်သောဂျပန်ဥယျာဉ်တစ်ခု၊ ရေမျှော်စင်ဟောင်းနှင့်လှပသောသစ်ပင်များလည်းရှိသည်။
La အန်ဒရာစီရိပ်သာလမ်း ၁၉ ရာစုတွင်ဘူဒါပတ်စ်အပါအ ၀ င်ဥရောပမြို့ကြီးများသည်ခေတ်မီသောလက်ဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ပါရီမြို့၏လမ်းစဉ်များကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှုတ်သွင်းခံထားရသောလှပသောနေရာတစ်ခုကိုမွေးဖွားခဲ့သည် အရမ်းကြော့။ ဒါဟာသူမအကြောင်းပါ ဟန်ဂေရီယန်အော်ပရာ၊ အကြမ်းဖက်အိမ်ပြတိုက်၊ အနုပညာအကယ်ဒမီရှိသည်s ... ကဏ္ three သုံးခုရှိပါတယ်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဥရောပ၏ရှေးအကျဆုံးမြို့၏မီထရိုကိုလည်ပတ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့ Budapest ကိုစကားမပြောနိုင်ဘဲ spa တွေအကြောင်းမပြောဘဲအကျော်ကြားဆုံးကတော့ Széchenyi Spa ။ ဤ site တွင်မတူညီသောကုထုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများရှိသောရေကန် ၂၁ ခုရှိပြီးနံနက် ၆ နာရီတွင်ည ၁၀ နာရီတွင်ပိတ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလွန်တက်ကြွသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ဘူဒါပက် » Budapest မှာကြည့်ရအောင်